घुँयत्राे : हाम्रो सुर्खेतको विजुली र विजुलीको हाकिमलाई कारबाही गर्ने मान्छे अहिलेसम्म कोही जन्म्या छैन जस्तो छ । – Yug Aahwan Daily
घुँयत्राे : हाम्रो सुर्खेतको विजुली र विजुलीको हाकिमलाई कारबाही गर्ने मान्छे अहिलेसम्म कोही जन्म्या छैन जस्तो छ ।
युग संवाददाता । ३ श्रावण २०७८, आईतवार १७:५० मा प्रकाशित
गोडा २ साता पहिले हो कि कहिले हो कुन्नि ? सुर्खेत उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष को नेतृत्वमा गा ब्यापारीहरुको टोलीले सुर्खेताँ बत्ति जाने रोगको निदान गर्दिनुपरो भनेछि विजुलीका प्रदेश हाकिमले मैले त बत्ति गा थानै पा थिन, तपाइँहरुले भन्नू भो ।
अब २ दिनभित्रै यो समस्या समाधान गर्छु भने विजुलीका हाकिमले भन्ने सम्चार पढन पाइयाथ्यो । तर त्यो सम्चार पढ्या २ दिन त के २ हप्ता पुग्न लाग्दानी सुर्खेतको बत्तिको रोग त जस्तातस्तै छ त हँ । उता भर्खर नयाँ आकी विजुली मन्त्रीले नि अब लोडसेडिङ्ग हुने र गर्न दिइने छैन भनेर गफ त देकै छिन् । तर हाम्रो सुर्खेतको बिजुली र विजुलीको हाकिमलाई कारबाही गर्ने मान्छे अहिलेसम्म कोही जन्म्या छैन जस्तो छ ।
किन त भन्दा जस्तासुकै मन्त्री आउनकी कार्यकारी प्रमुख आउन उनलाई कसैले हल्लाउन सक्या छैन । खासगरी कर्नालीका मुख्यमन्त्रीका आफ्ना मान्छे हुनु र माओवादी लडाकुकै शैलीका भाका हुनाले पनि उनको काममाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । अरु त के कुरा यो ४ बर्षसम्म शासन चलाउँदा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कुनैदिन बत्ति गाको कम्प्लेन हाकिम समक्ष गरेको बुझिएन ।
बरु मुख्यमन्त्री ले आफ्नो अफिस क्वाटर र मन्त्रालय तथा अरुलाई पनि जेनेरेटर र इन्भर्टर राख्न सल्लाह दिए । कतिलाइ जडानबापत सरकारबाट रकमै दिए होलान् । तर सुर्खेतमा निरन्तर अनियमित भएको विजुलीबारे कम्प्लेन गरेनन् । जनता त विचरा सरकारी अड्डाले सेवा दिएन भने मुख ताक्ने प्रदेश सरकारकै हो । तर सरकार जनताको पक्षमा कहिल्यै सान्त्वनाका दुई शव्द दिन तयार भएन ।
प्रदेशको मात्रै के कुरा केन्द्रको प्रतिनिधि जिल्लामा सिडिओ छन् । तर कसैले पनि विजुलीका हाकिमविरुद्धको उजुरी सुनेनन् । जनता वत्ति नबालेरै मासिक विद्युत तिर्न बाध्य छन् । त्यसैले पनि सुर्खेत विद्युतको हाकिम ठूलै माफिया डन हो कि के हो बुझ्नै गारो छ । विजुली अनियमितताबारे लेख्नेले पनि धेरै लेखे । तर हाकिमले कुनै टेरपुच्छर लाउँदैनन् ।
यो पटक ब्यापारीहरु नै गएर २ दिनको अल्टिमेटम दिएर त्यो समयभित्र बत्ति नदिए आन्दोलन गर्ने भनेको सुन्दा ब्यापारीले केही गर्छन्कि त जस्तो लाग्याथ्यो । तर २ हप्ता बित्नै लाग्यो । सुर्खेतको बिजुली।को समस्या ज्युँको त्युँ छ । त्यसरी अल्टिमेटम दिने व्यापारीको आन्दोलनको अत्तोपत्तो छैन । लाग्छ विजुलीको हाकिमले ब्यापारीको पनि पाइन छामि सके ।
प्राधिकरणमा घिसिङ्ग नभएको मौका पारेर प्राधिकरणका दलालहरु फेरि जनतालाइ अँध्यारोमा राख्न र उद्योग ब्यवसाय चौपट गर्न लागि परेका छन् । त्यसैले अबको सरकारले प्राधिकरणमा बसेर ट्रान्सर्फमर किन्न र कर्मचारी सेटिङ्ग मिलाउने गिरोहको पर्दाफास गर्दै उनीहरुलाई कारबाही गर्ने आँटे गर्याे भने विजुलीको समस्या समाधान होला ।
अन्यथा नक्कली ट्रान्सर्फमर ल्याउने र कर्मचारीको गिरोहको कारण जतिसुकै विद्युत उतपादन भए पनि हाम्रो समस्या जहाँको तँहिँ रहनेछ । त्यसैले ब्यापारीज्युहरु सडकमा आउन नसक्नेले आन्दोलनका ेअल्टिमेटम किन दिनु भो ? कि त यो पनि कतै तपाइँहरुको चुनावी रणनीति त हैन ?
घुँयत्राे : ओहो ! ओलीबा त साह्रै कडापो रैछन् त हँ
घुँयत्राे : हैन यो काँग्रेसलाई नी किन परिपरि १३ गते सरकार बनाउने बाध्यता पर्या हो के !
घुँयत्राे : हैन ! जाँदाजाँदै ओलीबाले माधव नेपाललाई भन्नु भनेर गए त गाँठे
घुँयत्राे : “चोक्टा खान गाकी बुढी झोलाँ डुबेर मरी“ भन्याझैँ भो त हँ मधेसीहरुलाई